सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल दिने प्रतिक्षामा बसेकाहरुलाई आयो खुसीको खबर ! – Sandesh Press
August 2, 2021 253
काठमाडौं, साउन १८ । सरकारले कोरोना संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बन्द रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल खुलाउने तयारी गरेको छ ।
विभागले पछिल्लोपटक अनलाइन आवेदन पनि बन्द गरेको छ । विभागका अनुसार ट्रायल खुल्ने टुंगो लागेपछि पुनः अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी गरिएको छ । यसअघि, विभागले कोटा प्रणाली गरेकोमा अब कोटा प्रणाली तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
तर, २४ गतेको छलफलपछि कार्यालयको सुझावका आधारमा यसको अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ । विभागले ट्रायल परीक्षा खुलाएसँगै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
Prevभगवान शिवको पूजा गर्दा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र धर्म हैन लाग्छ पाप
Nextआज पनि घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
जताततै एमालेको अग्रता यस्तो छ कारण